Warshad Mashiinka Nadiif ah ee Vibratory - Shiinaha Soo Saarayaasha Mashiinka Nadiif ah, Alaab-qeybiyeyaal
Mashiinka dhammeeya ee gariirka leh daboolka bilaashka ah
Codsiga & Faa'iidada
Nidaamyada dhameystirka buunbuurista gariirka waxay soo saaraan ficil goyn ah iyagoo ruxaya markabka wax soo saaraya (tubbada dhammeysa) xawaare sare,
taasoo keenta in warwareegayaasha iyo qaybo kala geddisan ay is xoqaan. Tallaabadani xoqidda waxay si sax ah u jajabisaa qaybaha si looga saaro burrsooyinka.
Mashiinka leh miisaanka wareega ee ku dhejisan tuubada ayaa soo saarta ficil gariir.
Mashiinnada burburka gariirka iyo nidaamyada dhammeeya waxay soo saaraan ficil goyn ah oo aad u dhameystiran.
Waxay ka soo saaraan walxaha jeebabka iyo meelaha firaaqada ah iyo meelaha daloolada ah, oo aan lagu samayn karin foostada foosto,
sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa qaybo aad u jilicsan ama adag. Xawaare sare iyo istaroog gaaban,
waxay sidoo kale wadi karaan qaybo waaweyn oo waaweyn oo aan waxyeelo lahayn. Wareegyo baalal ballaaran iyo jaranjarooyinka degitaanka ayaa si caadi ah loogu maamulaa nidaamyadan.
Nidaamyada dhameystirka gariirka ayaa sidoo kale amaahda si ay si otomaatig ah si otomaatig ah u noqdaan.
Waxay si buuxda otomaatig ugu noqon karaan hawlgalka socodka-ama waxaa loo isticmaali karaa hawlgal dufcadeed aasaasi ah.
Ficilku waa kan meeris yar oo xawaare sare ku socda oo sidaas aad u awood badan, haddana wuxuu keenaa culeys yar qaybaha
Moodooyinka kala duwan & Techincal
Model Awood Awoodda Mootada
Xawaaraha mootada PU Miisaanka (kg) Cabirka (L×W×H) mm
(r / daqiiqo) (mm)
Daaweynta dusha sare ee daaweynta qalabka biriijka mashiinka wax lagu dhammeeyo ee daboolaya sanqadh la'aan
Qalajiyaha qolka qalajiyaha warshadaha • Qalajiyaha kululaynta hawada kulul
Qalajiyaha kululaynta hawada kulul waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo in qaybaha qiiqa wasakhda ah iyo wasakhda bilaa qallalan yihiin, ka dib marka la sameeyo farsamaynta qoyan ee qoyan,
taas oo aad muhiim ugu ah qaybaha loo rinjiyeeyo inay yihiin hawlgal kama dambays ah, oo ku habboon in lagu farsameeyo qaybo yaryar.
Ku qallajinta hawo kulul iyo cavnum
Dambiisha hoose ee ka samaysan bir birta ka samaysan oo leh godad, biyo laga saaray meelaha dusha sare ee qaybo ka mid ah iyada oo la adeegsanayo xoog centrifugal taasoo kordhinaysa waxtarka shaqada.
Hawo diirran ayaa gaabinaysa waqtiga qalajinta waxayna uumi bixisaa qoyaanka waxayna ka ilaalisaa qaybaha miridhku iyo daxalka.
Xakamaynta xawaaraha isbeddelka Inverter ee xulashooyinka habka badan.
Ka ilaali aaladda si otomaatig ah inay u demiso korontada markay shaqeyneyso ama daboolka uu furay.
Mashiinka mashiinka ka saara mashiinka HOLDWIN Industrial Centrifugal qalajiyaha qalajiyaha 70L
Warshadda Centrifugal dewaterer
waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo in qeybaha wasakhda iyo daxalka ay qallalan yihiin, ka dib marka la marsiiyo qoyan, taasoo aad muhiim ugu ah qeybaha in lagu rinjiyeeyo hawlgalkii ugu dambeeyay
ugu habboon in lagu farsameeyo qaybo yaryar.
Ku qallajinta hawo kulul iyo cavnum. Dambiisha gudaha ee ka samaysan bir birta ka samaysan oo leh godad,
biyaha laga saaray meelaha dusha sare ee qaybaha iyadoo la adeegsanayo xoogga xoog wax lagu kordhiyo taasoo kordhinaysa waxtarka shaqada.
Mashiinka socodka otomaatiga ah
Mashiinka wax lagu nadiifiyo ayaa si weyn loogu isticmaali karaa warshadaha kala duwan ee biraha, walxaha aan birta ahayn ee ka hortagaya qaybaha shaabadda
qaybo makiinado, shubay iyo been abuur, h
cun cunno daaweyn iyo qaybo kale, iskudhexyaac, dejin, nadiifin iyo habab kale.
Gaar ahaan qaababka isku-dhafan, burrsado oksaydh waaweyn oo qaro weyn, iyo qaybo yaryar ayaa bixiya qalabka wax-soo-saarka ugu fiican.
Mashiinka nadiifinta Rotary otomaatiga ah ee leh kala-soocaha
1. Qalabaynta Vortex-ka iyadoo la adeegsanayo mabda'a socodka qulqulka asalka, shaqada iyo dhagaxa wax shiidaya si loo gaaro khilaaf degdeg ah oo ku filan, hufnaan iftiin sareysa, hagaajinta waxtarka 15-30 jeer.
2. Mashiinka leexleeyaha 'Vortex polisher' ee mashiinka, ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu doorto garaaca xawaaraha; saacad leh shaashad dijitaal ah, oo si fudud loo shaqeyn karo, ayaa had iyo jeer ogaan kara xaaladda shaqada.
3. Vortex polisher ujawaabida taangiga go'an oo lagu dhajiyay cinjirka polyurethane, iyo farqiga u dhexeeya ujawaabida la isku hagaajin karo, xirnaanta iska caabinta iyo nolosha dheer ee adeegga.
Ciddiyaha Automatic Steel ciddiyaha hufan mashiinka debcinta
Cabbirka awoodiisa waxaa loo qaybin karaa 150 litir, 300 litir iyo 600 litir oo dhowr qeexitaano ah Qalabka birta, birta, naxaasta, zinc, aluminium,
daawaha magnesium iyo waxyaabo kale oo lagu shaabadeeyo, shubay, loo shubay, abuurid, silig, dhoobada, jaad, shacaab, cusbada macmalka ah, caagagga,
dhoobada iyo walxaha kale ee walxaha lagu nadiifiyo dusha sare, kafeega, ka saar burrs, miridhku, shiidi kara, saxsanaanta shiida, dhalaalka dhalaalaya, taga filimka madow, shiidiida madow iyo kan wanaagsan,
Mashiinka nadiifinta Rotary otomaatiga ah
Ku habboon xabbad yar oo shaqo-shiid ah oo sarreeya iyo hawlo nadiifin ah, ayaa si dhakhso leh uga saari kara cambarka,
ciyaaro bur shiidi iyo nadiifinta, sidoo kale ku habboon saarista ee silica gel flash.
Kala sooca gariirka
1 、 Waxaa ku socda matoorro jiifa
2 system nidaamka sii deynta uick wuxuu oggol yahay beddelka shaashadda degdegga ah.
3 screen shaashadda la beddeli karo waxaa laga samayn karaa bir bir ah oo adkeysi leh oo daxallan ama ku dahaadhan PU si looga takhaluso xoqitaanka.
makiinado qashin qubka ultrasonic
Codsiga furaha mashiinka gariirka waa qaybo ka baaraandegaya biraha, biraha aan birta ahayn iyo kuwa aan birta ahayn. Ka sokow,
injineeradu waxay u adeegsadaan habka burr iyo goynta miridhku, qaybaha birta ah ee geesaha lagu wareejiyo iyo muraayadda la safeeyo. Intaa waxaa dheer,
Nidaamkani waa caan gaar ahaan nadiifinta qaybaha leh joomatari dusha sare leh iyo dusha sare.
Falanqaynta ka dib, ma jiro wax dhaawac ah oo dusha sare ah oo saamayn kuma yeelan karo cabbirka qaybaha.
Sidoo kale, dusha sare ee qaybaha ayaa hagaajin kara heerka 1-2. Mashiinka gariirka ayaa ku habboon in lagu dhammeeyo qaybo yaryar oo dhexdhexaad ah oo tiro badan oo tiro ah.
√ Jilicsan gacmeed ee kanaalka wax soo saarka.
√ Adoo gacan-gelinaya albaabka kala-soocida awood u leh ama ikhtiyaarka kala-soocida si firfircoon u firfircoon.
√ Hawlgal ku habboon iyo kharashka shaqada oo yaraaday
√ Miisaannada dheelitir la'aanta la isku hagaajin karo waxay u oggolaaneysaa xoojinta dhammaystirka kala duwan.
√ Xiro dahaadh adkaysi u leh oo laga sameeyay PU tayo sare leh.
√ Fidiyaha soo dejiya qalabka warbaahinta oo ay weheliso dheecaan wasakh ah.
Mashiinka nadiifinta Dhagaxa Stone
Nooca Dheer Mashiinka Dhamaadka Dhagaxa Dhageeya Codsiga: Shucaac, Deburring, Derusting, Dheecaan dusha sare, Hoos u dhigid, Nadiifinta ka hor dahaadhka ama kiimikada, Dhammeynta, nadiifinta Farsamo-yaqaanada: Qaabka Awoodda (L) Dhumucda dahaadhka (mm) Miisaanka madhan (kg) Mashiinka (kW) Cabbirka tubbada (mm) L × Qiyaasaha dibadda (mm) L × W × H HST240 240 20 450 2 × 1.1 690 × 672 1880 80 880 × 920 HST500 500 22 1200 2 × 2.2 1310 × 672 2870 × 880 × 920 HST750 750 22 1600 2 × 5.0 2 ... Xulka wararka oo dhan
Mashiinka nadiifinta birlabta ee birta yar yar
Mashiinka qotoma magnetic - qaybo yar yar oo ka soocaya saamaynta qummanaanta sax waa cajiib.
mabda'a mashiinka sifaynta birlabta magnetic: Mashiinka qotoma magnetic waa aalad cusub.
Isticmaalka isbeddellada xoogga korantada ku shaqeeya ee aadka u sarreeya, marinnada warbaahinta shiidi yar (heerarka birta aan lahayn).
taasoo keenta qulqulka xawaaraha sare, rog, gariir iyo dhaqdhaqaaqyo kale.
dusha sare ee shaqada.wax badan oo khilaaf ah oo dusha sare ah oo nadiifiya ayaa la gaarayaa. nadiifinta.la noqoshada saxitaanka shiidaalka iyo waxyeelada kale